Iinkqubo ezili-10 zeShishini kuTwitter | Martech Zone
I-10 zoShishino ii-Apps zikaShishino zeShishini
NgeCawa, Meyi 10, 2009 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Kukho izixhobo ezimbalwa eziqala ukuvela kwiinkampani zokulawula unxibelelwano zisebenzisa Twitter okanye ukusebenzisa iibhlog ezincinci ngaphakathi kwinkampani yabo.
Bendihlala ndilawula ukutyhala Martech Zone ifidi kuTwitter usebenzisa Twitterfeed. Xa ndibaleka ukuphuma kwexesha xa ndibonisa i-Twitterfeed kwi-webinar yamva nje, nangona kunjalo, abanye ababukeli babelane ukuba kukho ezinye izixhobo ezilungileyo phaya. Ndithathe isigqibo sokujonga!
Izixhobo zoLawulo lweTwitter zeNkampani
IXabiso leNtlalontle yoLuntu (ngokusesikweni iCotweet) inika amandla okuphatha iiakhawunti ezininzi, ishedyuli yeetweets, ukujija iposti ene-inishiyali zombhali, iposti kwiiakhawunti ezininzi kunye nokuhamba komsebenzi-ukukwazi ukunika i-tweet kwelinye ilungu lenkampani. Unokongeza umyalezo xa usabela i-tweet. I-SocialEngage ngoku iyinxalenye yosapho lweSalesforce ExactTarget!
Hootsuite sisixhobo esomeleleyo- kubandakanya abasebenzisi abaninzi, abahleli, ukondla ii-automation ze-Twitter, iiakhawunti ezininzi, ii-tweets ezicwangcisiweyo, iposi kwiiakhawunti ezininzi, i-URL efinyeziweyo enezibalo, I-Ping.fm ukudityaniswa kunye nokubanakho ukubandakanya iAdsense xa iURL emfutshane idluliselwe.
Esi sisisombululo esomeleleyo kolu luhlu. Inqaku elinye elilahlekileyo kule sisombululo, nangona kunjalo, kukulawulwa kokuhamba komsebenzi ekunikezeleni nasekujongeni imisebenzi.
Ubume beTwinter ikwi-beta evaliweyo kwaye khange ndikwazi ukujonga isisombululo okwangoku. UWoward uthe basebenza ngemicimbi ethile belungiselela ukuya kuphila. Ndikulindele phambili ukubona into iTwinterface emele ukuyinikela eyahlukileyo kwezi phakheji zingasentla. Okwangoku, iTwinterface ikhuthaza iiakhawunti ezininzi kunye nabasebenzisi abaninzi njengezinto zabo zangoku.
Olu luhlobo oluqinisekileyo ukuba lukhuphisane ngokukhawuleza, ke ngethemba ukuba iTwinterface ayisiyongxaki nje - ngethemba lokuba beza etafileni benempawu ezithile zomhlaba.
Ulawulo lwegama kwi-Twitter
Nabani na osete iZilumkiso zikaGoogle ukuzama ukubeka esweni i-Twitter kungekudala uza kufumanisa ukuba izilumkiso azizi… kwaye xa zisenzeka, ixesha lisemva kakhulu.
Yongeza kobo bunzima bokulawula amakhulukhulu ee-tweets kwii-akhawunti ezingenakubalwa kunye nokudideka kunye nokuphunyezwa okungalunganga kungekudala. IRadian6 yi ulawulo lweendaba ezentlalo Isixhobo esinetoni yeempawu-kubandakanya ukubeka esweni okwenyani kwayo yonke imithombo yeendaba zentlalo, ukuhamba komsebenzi ngokubanzi kunye nokuzenzekelayo.
I-Radian 6 ithatha iqonga labo ngokunyusa inotshi ngokusebenzisana neWebtrends njengokuba. Ukudibanisa imicimbi engaphandle kwesiza kunye nokubeka iliso kwindawo ekuyo kubahlalutyi iya kuba nkulu kolu shishino.
Ukuzenzekelayo kwiMidiya yeNtlalo
Ukuba awuthandi ukusebenzisa i-Twitter kuphela, kodwa thumela kwezinye iinethiwekhi ezingama-40 ezahlukeneyo, I-Ping.fm sisixhobo sakho! IPing.fm ibandakanya ukukwazi ukudibanisa izixhobo zakho zentlalo kunye neselfowuni ngeSMS, i-imeyile kunye nokuthumela umyalezo kwangoko. Le nkonzo ikwabonelela ngemiyalezo ebangelwe ngokwezifiso.
IPing.fm isenokuba ngumkhosi waseSwitzerland womyalezo wokuzenzekelayo kwimithombo yeendaba! Kuzo zonke izicelo ezidweliswe kwesi sithuba, esi sisicelo esinye ekungafuneki ukuba ngaphandle kweshishini.
I-Micro-Blogging yoShishino lwangaphakathi
Khawufane ucinge ukuba kuxhobisa njani abasebenzi bakho ukuba babe nesixhobo esikhuselekileyo sangaphakathi sokubloga. Ngoku unakho nesicelo esitsha kwintengiso:
Ngokutsho YeSocialcast indawo:
Ukusukela ngo-2005, iSocialcast ibingumboneleli ophambili kumaqonga onxibelelwano kunye nezisombululo kubo bonke abaxhasi abajongana nabathengi kunye nabathengi beshishini. Isekwe eIrvine, eCalifornia, iSocialcast kuphela kwe-SaaS yomboneleli wabucala wokuzenzela iinkonzo zentlalo yoluntu. Isoftware yethu idibanisa amanqaku emveli e-intranet kunye netekhnoloji yokuthumela imiyalezo ekuhlaleni ukuxhobisa abasebenzi ukuba bandise, benze kwaye babelane ngolwazi kuwo onke amashishini.
Ukwahlula kwiSocialcast kukukwazi ukubuza kunye nokuphendula imibuzo, ukudala isiseko solwazi lwangaphakathi lwenkampani. I-Socialcast nayo ibanga ubuNgcali beShishini kwezeNtlalo? isuti ye kubahlalutyi izixhobo- kodwa okubonwayo kubonakala kukukhanya kuyo nayiphi na ingqondo ... kujongeka ngakumbi njengengxelo elula.
Ngokutsho Yammer indawo:
IYammer sisixhobo sokwenza iinkampani nemibutho ivelise ngakumbi ngokutshintshiselana ngeempendulo ezimfutshane rhoqo kumbuzo omnye olula: 'Usebenzela ntoni?'
Njengoko abasebenzi bewuphendula lo mbuzo, ukutya kuyenziwa kwindawo enye enika abantu ithuba lokuba baxoxe ngezimvo, bathumele iindaba, babuze imibuzo, kwaye babelane ngamakhonkco kunye nolunye ulwazi. U-Yammer ukwasebenza njengesikhombisi senkampani apho wonke umqeshwa eneprofayili kunye nesiseko solwazi apho iincoko zangaphambili zinokufikeleleka ngokulula kwaye kubhekiswe kuzo.
I-Present.ly inika abasebenzi bakho amandla okunxibelelana kwangoko nenqanaba labo, babuze kwaye baphendule imibuzo, babelane ngemithombo yeendaba, nangaphezulu ngendlela yoqhakamshelwano yonxibelelwano ebenguvulindlela yi-Twitter.
Okwangoku kubonakala ngathi kunamandla amakhulu, kubandakanya amaQela, iziQhoboshelo, kunye ne-API ehambelana ne-Twitter.
IJografi kunye neNtloko yeNtengiso ekuJoliswe kuyo kwi-Twitter
Ngokungafaniyo nezinye iindlela zokuthengisa ezivela kwi-Twitter, i-Twitterhawk yenza ukuba iinkampani ziphendule ngokuthe ngqo kubasebenzisi, ngegama eliphambili okanye ibinzana, kunye nendawo ekuyo. Le yinkqubo endivavanye ngobude obukhulu kwaye ndazithanda iimpawu ze.
Hlanganisa ezi zinto kunye nezaziso ze-imeyile (ngalo lonke ixesha inkqubo ithumela i-tweet) kunye nokukwazi ukulandelela ii-URL ezimfutshane (njengakwi Hootsuite), kwaye oku kunokuba sisicelo sentengiso esikumgangatho wehlabathi!
QAPHELA: 5/13/2009 I-Twitter iyekile ukubonisa iimpendulo (@) kubantu ongabalandeli, ke oku kunokuba nefuthe elibonakalayo kwisicelo esifana ne-Twitterhawk okoko i-Twitterhawk isebenzisa iimpendulo njengendlela yokukhuthaza.
Yenza iqela kwi-Twitter
I-Twitter ayinakho ukusebenza kweqela, kodwa ungathatha ithuba Ndiyabulela ukoyisa ukusilela. IqelaTweet livumela iqela ukuba lithumele imiyalezo nge-Twitter ethi isasazwe kwangoko ngasese kumalungu eqela kuphela.
Ukuseta iqela lenkampani yakho kunye nabathengi bakho yindlela efanelekileyo yokusasaza imiyalezo ebalulekileyo ngokukhawuleza nangokulula!
Kukho izixhobo ezimbalwa phaya ngaphandle zokuzazisa ngokwabo njengenkulumbuso yesicelo solawulo lweshishini kwi-Twitter; Nangona kunjalo, uninzi lwazo lukhanya kakuhle kwiimpawu. Nawuphi na umbutho, kubahlalutyi kunye nokuzenzekelayo kufuneka kube yimfuneko. Yonke into eyongezwa kwifayile ye- Isicelo se-twitter yeshishini kufuneka iqinisekise ukuba inokubalelwa ekuphuculeni imbuyekezo kutyalo-mali kwimizamo yeendaba zentlalo yabasebenzi bakho.
tags: i-cotweetngokuthe ngqo ekuhlalenimzantsiwebhootsuiteping.fmngokuiradian6ezentlalointlaloujonganomzantsiwebintlama
Twitter endimthandayo, ndicela uyeke ubugeza balandelayo
Faka isicelo sePhulo likaGoogle kuHlolisiso ngokuSebenzisa ngamandla i-jQuery
Meyi 11, 2009 kwi-5: 29 PM
Enkosi kwakhona ngokucebisa iRadian6. Kuyamangalisa kum ukuba zingaphi izixhobo, amaqonga, usetyenziso kunye nezinto ezinjalo ezihlala zisiza kwintengiso. Ubungqina obulungileyo kum bokuba imidiya yoluntu ibalulekile ngokwaneleyo ukuba abantu abahoyi kuphela, kodwa bajonge ukulawula ngokusebenzayo ukuthatha kwabo inxaxheba. Yinto entle leyo.
Ndiyathemba ukuba konke kulungile.
UMlawuli woLuntu, iRadian6
UDick Morgan CMC, FIMC
Meyi 12, 2009 kwi-11: 12 AM
Enkosi ngolwazi olulungileyo malunga ne-Twitter. Ndingumntu omtsha kwaye ndifunda izakhono. Izinto ezinje zindinceda ukuba ndihambe ngokukhawuleza.
Juni 25, 2009 ngo-12: 11 PM
Isithuba esihle! Kukho izixhobo ezininzi ezipholileyo kunye neeapps phaya. Ngelixa ayisosixhobo ncam samashishini, ndiyathanda ngokobuqu Ref.ly. Sisixhobo esikhulu sabantu abafuna ukwabelana ngeendinyana zeBhayibhile kuTwitter.
NgoJulayi 1, 2009 ngo-1:11 PM
Kunye neRadian6, ndingacebisa kakhulu Iipeti zangasemva, isicelo 'esingafinyeziyo' ii-URL kwaye sinokukwazisa xa iisayithi zakho ziyenzile kwi-Twitter!